Israa'iil ayaa diiday inay saxiixdo bayaan Qaramada Midoobay ah oo ku saabsan sida Shiinaha uu ula dhaqmayo Uighurs - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Israa’iil ayaa diiday inay saxiixdo bayaan Qaramada Midoobay ah oo ku saabsan...
Israa’iil ayaa diiday inay saxiixdo bayaan Qaramada Midoobay ah oo ku saabsan sida Shiinaha uu ula dhaqmayo Uighurs
Israa’iil ayaa ka gaabsatay inay saxiixdo bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Qaramada Midoobay oo lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan sida Beijing ay ula dhaqanto Muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uighur.
43 wadan oo uu ku jiro Mareykanka ayaa saxiixay war-murtiyeedka uu hogaaminayo Faransiiska.
“Waxaan si gaar ah uga walaacsanahay xaaladda ismaamulka Xinjiang Uighur,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Warbixinno lagu kalsoonaan karo ayaa tilmaamaya jiritaanka shabakad ballaaran oo ah xeryo “dib u dhan bedelid siyaasadeed” halkaas oo in ka badan milyan qof si aan sharciga waafaqsanayn loogu xidhay.”
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa’iil ayaa u sheegtay wargeyska The Times of Israel war qoraal ah oo ay soo saartay, “Isra’iil waxa ay ku muujisay walaaca ay ka qabto Uighurs dhinacyo kala duwan oo diblumaasiyadeed.
Mid ka mid ah tusaalahaas ayaa ahaa saxiixii aan ku saxiixnay bayaanka Kanada [Uighurs] bishii Juun ee Golaha Xuquuqul Insaanka. Mawqifkayaga ku aaddan arrinta isma beddelin.”
Bayaanka Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqaya Shiinaha “inay xaqiijiso ixtiraamka buuxa ee sharciga iyo inay u hoggaansamaan waajibaadka ka saaran sharciga qaranka iyo kan caalamiga ah ee la xidhiidha ilaalinta xuquuqda aadanaha.”
Bishii Juun, Israa’iil waxay ka mid ahayd 41 waddan oo ka tirsan Golaha Xuquuqda Aadanaha kuwaas oo ka codsaday Shiinaha inay u oggolaadaan “si degdeg ah, oo macno leh oo aan xannibnayn” si kormeerayaasha madaxbannaan ay u soo booqdaan gobolkaa Xinjiang.
Go’aanka lagu taageerayo cabbirka bishii Juun ayaa yimid ka dib cadaadis uga yimid madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, sida uu sheegay Walla News.
Previous articleMidowga Afrika iyo Bankiga Adduunka ayaa joojiyay wada shaqayntoodii Suudaan sababo la xidhiidha afgambiga militari
Next articleParis museum exhibits Benin’s treasures for the last time